Qubanaha » Dowladda Soomaaliya oo wadda qorshe ay lacag shilin Soomaali cusub ku soo saareyso
Dowladda Soomaaliya oo wadda qorshe ay lacag shilin Soomaali cusub ku soo saareyso
Muqdisho-Qubanaha.net- Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise oo Wrabaahinta la hadlay ayaa sheegay in mudo labo sano ah ay soo wadeen daraasad iyo qiimeyn ku aadan sidii loo sameyn lahaa lacago cusub oo Shiling Soomaali ah.
Waxa uu tilmaamay Bashiir Ciise in hada howsho gabo gabo ay mareyso uuna rajeenayo in sanadkan gudihisa lasoo daabaco lacago cusub oo Shiling Soomaali ah si wax looga qabto shiling Soomaaliga sii dabar go’aya.
Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in lacagaha ku baxaya sameynta lacagta Shiling Soomaaliga in ay bixionayana Deeq bixiyaaha caalamka kuwaa uu tilmaamay in horey looga codsaday.
Waxa uu sheegay Gudoomiyaha Bangiga Dhaxe in Shir ka dhici doona sanadkan magaalada London ee Caasimada Britain looga hadli doono sidii Deeq bixiyaasha lacago ugu bixin lahaayeen sameynta Shilin Soomaaliga.
Qiimaha Shilin Soomaaliga ayaa mudo sanado kadib saro u kacay doorashadii Farmaajo kadib, waxaana saakay Halkii Dollar lagu sarifayaa lacag dhan 20-Kun Shiling Soomaali ah halka markii hore lagu sarifayay 23-Kun Shling Soomaali ah.